GoldenHour dia manampy antsika hamantatra ny fotoana sy toerana tsara indrindra haka sary tsara | Vaovao IPhone
Ny zava-baovao lehibe nentin'ny iPhone 7 Plus vaovao amintsika dia misy ifandraisany amin'ny fakantsary, ilay fakan-tsary roa izay isaorana ny rindrambaiko iOS, mamela antsika hamorona sary tsara tsy misy ifantohana ny mombamomba azy. Nandritra ny fotoana vitsivitsy izao, mpampiasa maro no nanapa-kevitra ny hametraka fakan-tsary fakan-tsarimihetsika ary hifantoka fotsiny amin'ny fampiasana fakantsary fakan-tsarimihetsika, satria mihoatra na latsaka ary mitahiry halavirana, dia manome izany kalitao izany izy ireo. Na izany aza, nanjary malaza be koa ny fampiasana fakantsary DSLR tato anatin'ny taona vitsivitsy, na dia efa elaela aza dia toa nihena ihany koa ny fahalianana.
Ny fakantsary DSLR dia amidy tsy miankina, na dia afaka mahita fonosana aza isika izay misy solomaso manana kalitao tsara fa hanombohana mihoatra ny ampy. Raha tianao ny maka sary, fantatray antoka ny teny hoe ora manga sy ora volamena. Ireo teny roa ireo dia manondro ora manokana mandritra ny andro ahafahantsika manararaotra ny hazavan'ny masoandro hahitana vokatra tena tsara, na amin'ny fakan-tsary DSLR, fakan-tsarimihetsika fakantsary na fakan-tsarimihetsika finday avo lenta. mahafa-po foana.
Sary: Flickr Jimflix!
Ho an'ireo mpampiasa rehetra izay tia sary ary tsy te hahalala ny ora manga na ny ora volamena, ny app GoldenHour ho an'ny iOS no vahaolana. Ity fampiharana ity dia mampahafantatra antsika ny fotoana hanombohan'ny ora volamena (anaovan'ireo sary miloko mavo) sy ny ora manga, ny fotoana ahodian'ny lanitra loko manga mahery ary manome valiny mahatalanjona ho antsika. Ho fanampin'izany, ity fampiharana ity dia mampahafantatra antsika ihany koa ny toerana tokony halehantsika hahazoana vokatra tsara indrindra, satria tsy miakatra na miafina amin'ny toerana iray foana ny masoandro.
Sary: Flickr Zexsen Xie
Afaka manolotra anay ity angona ity, GoldenHour dia mampiasa ny GPS an'ny fitaovantsika, mba hahafahantsika mampiasa azy io na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao. Raisina ihany koa ny toetr'andro hamaritana ny elanelam-potoana hahafahana mivoaka sy maka ny sarinay hanararaotana ny ora manga sy ny ora volamena. Raha tianao ny maka sary ary manana fakan-tsary DSLR ianao dia mety aminao ity fampiharana ity. Manokana indrindra, nandinika azy io nandritra ny volana vitsivitsy aho ary miaiky aho fa tsara ny manararaotra ireo ora sarobidy ireo, izay mamela antsika hanana valiny mahatalanjona.
Ora volamena iray€ 4,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » GoldenHour dia manampy antsika hahita izay fotoana sy toerana mety indrindra haka sary tsara
Pokémon GO ++ 1.21.2, kinova vaovao amin'ilay hack malaza, azo alaina ho an'ny iOS izao